Gandaki Sanchar » पर्वतमा सामाजिक रुपमा धेरै काम गर्न बाँकि छ : अध्यक्ष पुरन गिरी
पर्वतमा सामाजिक रुपमा धेरै काम गर्न बाँकि छ : अध्यक्ष पुरन गिरी
अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको दोस्रो अधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । पैयु गाउँपालिका हुवासमा सम्पन्न अधिवेशनले अध्यक्षमा पुन स् पुरन गिरीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ । संस्थाले पर्वत जिल्लाको समृद्धिका लागि काम गदै आएको छ । समाजले विशेष गरि शिक्षा, स्वास्थ्य जोड दिँदै आएको छ । साथै जिल्लामा घट्ने भैपरि समस्यामा पनि सहयोग गदै आएको छ । नवनिवार्चित कार्य समिति आएपछि समाजले भावी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा पर्वत नेपाल अनलाईनका पत्रकार साजन परियारले अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजका अध्यक्ष पुरन गिरी सँग गर्नुभएको समसामयिक कुराकानी ।
अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको अवको लक्ष्य के के हुन्छ ?
पर्वत जिल्लाले तपाईहरुको योगदानलाई कसरी हेरेको महसुस गरिरहनुभएको छ ?
संस्थाले बिदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागी के के योगदान पु¥याईरहेको छ ?
संस्था गठन भएदेखी यहाँहरुले के के काम गर्नुभयो ?
प्रकाशित मिति ५ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०६:३९